Guddiga la dagaallanka musuq maasuqa ee Soomaaaliya magaalada Muqdisho ku doortay Guddoomiyaha iyo guddoomiye Ku Xigeen guddiga. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Guddiga la dagaallanka musuq maasuqa ee Soomaaaliya magaalada Muqdisho ku doortay Guddoomiyaha...
Guddiga la dagaallanka musuq maasuqa ee Soomaaaliya magaalada Muqdisho ku doortay Guddoomiyaha iyo guddoomiye Ku Xigeen guddiga.
Previous articleMadaxweynaha Dalka Tanzaaniya Marwo Samia Suluhu Hassan oo booqasho labo maalmood uga bilaabatay dalka Kenya.
Next articleWasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo kulan hawleed shaqo la qaatay mas’uuliyiinta iyo golaha cusub
Dowladda Puntland ayaa mar kale ku celisay in shirka doorashooyinka Soomaaliya aan lagu qaban doonin Garoowe. Jawaabta labaad ee Puntland ayaa kusoo aadaysay Xilli Farmaajo...